Android 9.0 Pie hadda waa rasmi: Cusboonaysiinta waxaa loo heli karaa Google Pixel | Androidsis
Android 9.0 Pie waa halkaan: Soo hel faahfaahinta oo dhan
Eder Ferreño | | Tababarada, Noocyada Android
Mid ka mid ah qarsoodiyadii ugu waaweynaa ee bilihii la soo dhaafay ayaa ahaa magaca magaca 'Android P'. Fursado badan ayaa la tixgeliyey, laakiin had iyo jeer noqda magaca macaan. Laakiin, waxay umuuqataa inaynaan sugi doonin inbadan wixii kadambeeya tan. Sababtoo ah magaca loo doortay qaabkan ayaa aakhirkii shaaca laga qaaday. Android 9.0 Pie hadda waa rasmi.
Qaabka looga dhigay rasmi ahaan ma ahayn kuwa ugu caansan diinta, maxaa yeelay waxay soo martay cusbooneysiinta Google Pixel in waxaan horeyba u ogaanay jiritaanka Android 9.0 Pie. Google iskuma murgin, waxayna doorteen Pie (Cake) inuu yahay magaca noocaan.
Digniin la'aan, iyo wax lama filaan ah ayaa ku dhacay warkan. Google Pixel wuxuu horey uhelay cusbooneysiinta rasmiga ah ee Android 9.0 Pie. Waa war wanaagsan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha leh mid ka mid ah moodooyinka shirkadda Mareykanka. Maaddaama ay iyagu noqon doonaan kuwa ugu horreeya ee ku raaxeysta nuqulkan rasmiga ah.
Bandhigga rasmiga ah ee nooca nidaamka hawlgalka waxaa loo qorsheeyay Ogosto 20, waxayna umuuqataa inay sii socoto. In kasta oo taariikhdan ka hor waxaan horeyba u ogaanay faahfaahinta ugu weyn ee ku saabsan. Waxaan ogaanay wararka sheegaya inuu naga tagayo mahadsanidiin noocyadii hore ee bilihii la soo dhaafay.
Sidoo kale, kaliya maahan Google Pixel inuu ku raaxeysan doono Android 9.0 Pie. Sidoo kale taleefannada leh Android One horeyba way u helaan. Marka waa cusbooneysiin ballaadhan oo shirkadda Mareykanku horeyba si rasmi ah u bilowday. Sidoo kale taleefanada ku jiray Android P betas horeyba waxay u heleen cusbooneysiintan la heli karo, ama waxay lahaan doonaan saacadaha soo socda.
Android 9.0 Pie OTA ee Google Pixel ayaa la filayaa in la heli karo maanta.. Moodooyinka intiisa kale waa inay lahaadaan isla waqtigaas, laakiin taariikh cayiman lama cayimin xilligan. Waxaa la joogaa waqtigii lagu raaxeysan lahaa dhammaan wararka in noocan ah nidaamka qalliinka uu naga tagayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Android 9.0 Pie waa halkaan: Soo hel faahfaahinta oo dhan
LG Q8 (2018): Qadka dhexe ee cusub ee biyuhu xireen